Otu esi etinye & hazie Git na Fedora 35 - LinuxCapable
Usoro 1. Wụnye Git na DNF (A kwadoro)
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi etinye Git na sistemụ arụmọrụ Fedora 35 gị na ụzọ dị iche iche.
Git dị na ebe nchekwa Fedora ndabara, arụnyere na iji njikwa ngwugwu DNF. Site na ndabara, ekwesịrị itinye nke a na sistemụ Fedora 35 gị.
Iji wụnye Git ọzọ, jiri iwu a:
Nkuzi a ekpuchila otu esi etinye ụdị nchekwa nchekwa kwụsiri ike site na iji njikwa ngwugwu DNF. Agbanyeghị, maka ndị chọrọ ụdị Git kacha ọhụrụ, a na-atụ aro ka ịwụnye ya mgbe niile site na isi mmalite.
N'oge edere ntuziaka, 3.34.00-RC1 bụ ntọhapụ kachasị ọhụrụ.
Cheta, ị ga-mkpa budata ọzọ na chịkọtakwa maka mmelite n'ọdịnihu. Echefula ịga n'ihu na-elele ibe ntọhapụ GIT.
Enwere ike ịmụta nhazi ọzọ site na ịga na akwụkwọ. Ntọala ndị dị n'elu kwesịrị ịtọ ndabara nke ihe ọtụtụ ndị ọrụ ga-achọ.
Categories Fedora Tags Fedora 35, GIT Mail igodo